XOG: Kenya oo toogasho ku dishay nin ay Al-Shabaab uga shakisay + (Magac) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Kenya oo toogasho ku dishay nin ay Al-Shabaab uga shakisay +...
Kwale (Halqaran.com) – Booliska waddanka Kenya ee Gobolka Kwale ayaa waxa ay toogasho ku dileen Nin ay sheegeen in ay uga shakisan yihiin maleeshiyaadka Ururka Al-shabaab.
Tom Odero, oo ah Taliyaha Booliska ee degaanka ayaa sheegay in Ninka la toogtay oo lagu magacaabo Rashid Mwatsumiro la dilay kaddib markii saddex qof lagu dilay gobolka muddo laba todobaad gudahood ah isagana looga shakiyay.
Taliyaha ayaa sheegay in Ninka la dilay Gurigiisa ay ka soo heleen Baskoolad iyo agab kale oo sahlay tuhunka ah in uu ka tirsanaa AL-shabaab.
Xilligii ay tagayeen Guriga Ninka la dilay ayuu sheegay in uu rasaas ugu jawaabay Ciidanka taasna ay sababtay in ay xabado is weydaarsadaan sidaasna ku dhintay Ninka la tuhmayay.
Eedaha loo heyso waxaa ka mid ah 10kii August sanadkan uu qoor gooyay Wadaad Diimeed deegaankaas caan ka ahaa.
Si kastaba, waxaa kaloo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dilka sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Badda ee dalka Kenya oo isla Bishii August lagu dilay degaankaas Kwale ee dhaca xeebta Dalka Kenya.
nin Al Shabaab
Wadaad qoorta laga gooyay